COVID-19 soo jeedinta cabbudhinta/tirtiridda xogta ee ay u badan tahay inay ka waxyeello badan tahay waxtar, ayay warbixinta PERC ogaatay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » COVID-19 soo jeedinta cabbudhinta/tirtiridda xogta ee ay u badan tahay inay ka waxyeello badan tahay waxtar, ayay warbixinta PERC ogaatay
Warbixin cusub oo ay soo saartay Golaha Siyaasadda & Golaha Cilmi-baarista Dhaqaalaha (PERC) ayaa lagu ogaaday in tallaabooyinka xakamaynta/tirtirka xogta ee la soo jeediyay si wax looga qabto burburka dhaqaale ee COVID-19 ay si weyn hoos ugu dhigi doonto helitaanka deynta haddii la hirgeliyo. Warbixinta, oo cinwaan looga dhigay “Saamaynta Nidaamka Cabbirka Guud ee Xogta Meel-ka-dhaca ah ee Warbixinta Deynta,” ayaa u ekeyd saamaynta xakamaynta baaxadda leh iyo tirtirka macluumaadka deynta ee taban.
18kii bilood ee la soo dhaafay, siyaasad -dejiyeyaasha Mareykanka iyo adduunkaba waxay la halgamayaan arrinta murugsan ee xiritaanka suuqyada tallaabooyinka daryeelka caafimaad ee lagama maarmaanka ah. Gudaha, jawaabta warbixinta amaahda oo aad u cidhiidhi ah oo la beegsaday oo ka timid Xeerka CARES ayaa u muuqata mid inta badan lagu guulaystay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray baaqyo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xubnaha Koongareeska si loo mamnuuco nidaamka guud ee ka-warbixinta deynta ee wararka xun, oo daboolaya dhammaan macaamiisha inta lagu gudajiray (iyo xoogaa ka dib) xiisadda COVID-19-siyaasad loo yaqaan “xakamaynta iyo tirtirka . ”
In kasta oo masiibadu ku socoto jihada saxda ah ee Mareykanka, waddanku sinaba ugama baxsan kaynta. Iyada oo 22% dadka Mareykanka aan la tallaalin, iyo heerarka tallaalka oo aad uga hooseeya adduunka, waxaa jira fursado badan oo dhibaatada daryeelka caafimaadku dhinac u aadi karto. Haddii ay taasi dhacdo, sharci -dajiyayaashu waxay isku dayi karaan inay sameeyaan tallaabooyin cabburin/tirtirid si loo ilaaliyo macaamiisha. Waxaa intaa dheer, codsiyada cidhiidhiga ah ee habkan ayaa dhowaan lagu soo bandhigay Koongareeska si wax looga beddelo Xeerka Oggolaanshaha Difaaca Qaranka (NDAA). In kasta oo si fiican loogu talogalay, sida cabbirka ballaadhan, codsiyada cidhiidhiga ahi waxay u badan tahay inay waxyeello u geystaan ​​kuwa wax amaahda ah marka loo eego kuwa waxtarka leh-marka ay sidaas tahay shaqaalaha milatariga ee hawl-galka ah.
Warbixinta PERC waxay ogaatay in iyadoo siyaasad cabudhin/tirtirid baahsan ay jirto, celceliska dhibcaha dhibcaha ayaa kor u kaca-laakiin kuma filna inay la jaanqaadaan kororka isku xiga ee dhibcaha goynta ah ee ay isticmaalaan amaahiyayaashu si ay u go'aamiyaan deyn-bixiyayaasha ay diidaan iyo kan ay aqbali doonaan. Tusaale ahaan, ka dib lix bilood oo kaliya oo ah cabudhin/tirtirid, dhibcaha goynta ayaa kor u kacda 699 halka celceliska dhibcaha dhibcaha ay kordhayaan kaliya 693. Farqiga u dhexeeya labada ayaa sii ballaarmaya waqti ka dib, taasoo la micno ah siyaasadda dheer ee cabudhinta ayaa jirta, dad badan oo loo diidi doono inay helaan deyn guud oo la awoodi karo.
Caddaynta daraasaddan cusub ayaa sidoo kale muujinaysa in amaah-bixiyeyaasha da'da yar, kuwa amaahda ah ee dakhligoodu hooseeyo, iyo kuwa wax-amaahda bulshooyinka laga tirada badan yahay ay la kulmi doonaan saamaynta taban ee ugu weyn. Tusaale ahaan, iyadoo aqbalaadda amaahda ee dhammaan dadka ay hoos u dhacday 18%, waxay hoos ugu dhacday 46% kuwa wax amaahda ugu yar. Xaalad kale, oo ay ku jirto saamaynta halista anshaxa ee siyaasad cabudhin/tirtirid, ayaa heshay helitaanka amaahda ee 18- ilaa 24-sano jirka ah oo hoos loo dhigay 90%yaab leh. Saameynta baahsan ee hal koox koox ayaa laga yaabaa inay saameyn joogto ah ku yeelato awoodda ay u leeyihiin inay hanti abuuraan iyo inay dhisaan hanti-waxaa xusid mudan in Millenniyadu ay ku dhibtooday dhinaca hore marka loo eego Gen-Xers iyo Boomers isla da'da. Dakhli ahaan, waxay hoos ugu dhacday 19% kooxda dakhliga ugu hooseysa laakiin 15% kuwa ugu sarreeya - 27% farqiga. Xubnaha qoysaska ku nool meelaha caddaanka ah, ee aan ahayn Isbaanishka, waxay hoos u dhacday 17%, laakiin meelaha dadka madow u badan yihiin, waxay hoos ugu dhacday 23%, iyo deegaannada Hispanic-ka u badan, waxay hoos ugu dhacday 25%.
PERC ku dhawaad ​​labaatan sano oo cilmi baaris ah ayaa diiradda saarey adeegsiga mas'uuliyadda xogta si loo ballaariyo ka mid noqoshada maaliyadeed. Daraasadani waxay ahayd sii wadista warqad cad oo hore oo cinwaankeedu ahaa “Isku -darka ayaa ka fiican kala -goynta: Halista ka timaadda Xakamaynta Xogta iyo Faa’iidooyinka Ku -daridda Xog Wanaagsan ee Warbixinta Deynta ah.” Waxay dib -u -eegis ku samaysay cilmi -baaris hore oo ku saabsan tirtiridda xogta waxayna soo bandhigtay natiijooyin joogto ah oo ah in tirtiridda xogtu ay waxyeello u tahay dadka wax amaahda. Marka la barbardhigo xakamaynta/tirtiridda, cilmi-baarista PERC waxay ogaatay in ku-daridda xogta lacag-la'aanta ah ee warbixinnada amaahda macmiilku ay kordhiso helitaanka sumcadda si aan la arki karin (ugu horrayn dadka dakhligoodu hooseeyo, dadka da'da yar iyo waayeelka Ameerika, bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo muhaajiriinta).
Warbixintu waxay ku talisay in lagu daro xogta lacag-bixinta ee togan (telefishanka, fiilada iyo telefishanka dayax-gacmeedka, iyo shirkadaha ballaadhinta nidaamka warbixinta deynta, halkii laga tirtiri lahaa xogta lacag-bixinta ee xun). Ku darista xogta saadaasha iyada oo loo marayo kanaalada ruqsadda macaamilka ayaa laga yaabaa inay sidoo kale gacan ka geysato dib-u-dhicinta xogta faylka amaahda dhaqameed ee ka dhashay masiibada.
Madaxweynaha PERC iyo agaasimaha guud Dr. Michael Turner ayaa yiri, “Siyaasad -dejiyeyaasha Mareykanka waxay ku gaareen dheelitirnaan jilicsan qodobbada Xeerka CARES — oo shaqeynayay. Hore u socoshada, si kastaba ha ahaatee, daraasaddayadu waxay muujineysaa inay si taxaddar leh ugu tuntaan. ” Dr. Turner wuxuu tilmaamay suurtogalnimada in dadka laga reebay cadaadis/tirtirid ay u jeesan doonaan amaahiyaha qaaliga ah (dukaamada pawn-ka, amaahiyaha lacag bixinta, amaah-bixiyeyaasha lahaanshaha) si ay u daboolaan baahidooda dhabta ah ee deynta. "Waxaan u maleyneynaa inay tahay waqtigii Koongarasku u dhaqmi lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa ka mid noqoshada xogta kale ee warbixinnada amaahda macaamiisha," ayuu Turner raaciyay.
Aasaasaha Ururka Horumarinta Maaliyadeed & Horumarinta Xirfadlaha (SFE & PD) iyo Madaxweyne Ted Daniels ayaa raaciyay, “Warbixinta PERC ee ku saabsan warbixinta amaahda waxaa ku jira macluumaad aad waxtar u leh maxaa yeelay waxay faahfaahinaysaa sida loo soo jeediyay tallaabooyinka xakamaynta/tirtiridda xogta COVID-19 dhab ahaantii waxay yareyneysaa helitaanka sumcadda macaamiisha, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay. Intaa waxaa dheer, warbixinta PERC waxay muujineysaa baahida loo qabo in si caddaalad ah oo sax ah loo muujiyo dhammaan xogta amaahda - sida xogta lacag -bixinta ee telecom -yada, fiilada iyo telefishanka dayax -gacmeedka, iyo baahinta - lagu soo gudbiyo warbixinnada amaahda.
Duulimaadyada ka imanaya Almaty kuna socda New Delhi ee Air Astana hadda
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica oo hadda ka hadlaya Anchor...